Google inovandudza chirongwa cheYouTube cheApple TV | IPhone nhau
Youtube inovandudza maratidziro ayo uye mashandiro pamwe neyayo nyowani yekuvandudza yeTVOS
ari pasocial network vagara vakanyatsoteerera nezvese shanduko dzinogadzirwa mumasisitimu anoshanda. Kugadzira chigadzirwa chitsva kunosanganisira vandudza yako interface kujairira kune zvitsva izvo zvinoperekedza zvakataurwa chigadzirwa. Izvi ndizvo zvakaitika kune iyo Apple TV, chisungo pane chikamu chevagadziri kuti vabatanidzwe mukugadzirisa kwavo kunyorera.
Ndiyo nyaya ye Youtube Kugadziridza kwayo kwakasvika mwedzi yakati wandei yapfuura paTVOS ine interface yakafanana neiyo yeDevices, nekubata zvine njodzi. Nekudaro, neidzo nyowani nyowani dzave kuvandudza uye mumazuva achangopfuura vhezheni nyowani yakatangwa iyo inoshandura zvishoma iyo interface yeapp.
Chigadzirwa chakasiyana chinosiya yazvino Youtube maficha
Pfungwa yeGoogle neYouTube yaive kubatanidza zvigadzirwa zveese masisitimu anoshanda saka kuti Android chishandiso chaive nekubata kwakafanana nechishandiso chatinogona kuve nacho pane iyo iPad. Dambudziko harina kugara ipapo, asi zvishandiso zvaive zvisisiri mafoni nemapiritsi vakakanganisa muhukama hwavo. Iyi ndiyo mamiriro eApple TV neayo tvOS inoshanda sisitimu, kubata uye mashandiro eiyi inoshanda system akasiyana nemabasa anowanikwa pane iOS kana Android.
La nyowani Youtube yekuvandudza yeTVOS Iyo inovandudza iyo interface nekuishandura iyo zvishoma, ichiita kuti iwedzere kufanana nekubata zvakafanana kune mamwe ese mafomu anowanikwa eTVOS. Pamusoro pezvo, kunatsurudzwa kwakaverengerwa kwete mukuita chete asiwo mukugadzirisa kodhi kuitira kuti mavhidhiyo atorwe zvishoma uye kunyorera hakuwanzo kuvharwa kamwe kamwe, kunyange hazvo neshanduro dzakapfuura chiitiko ichi chisingachagone.
Matanho ekutevera eYouTube ndeaya chengeta iyi kero kusvikira iwe uine kunyorera kunotora mukana kune ese mabhenefiti eApple TV, senge: Siri Remote kana kusangana nemamwe maIOS. Tichaona kana tichiona zvimwe zveYouTube zvinyorwa mumwedzi inotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Youtube inovandudza maratidziro ayo uye mashandiro pamwe neyayo nyowani yekuvandudza yeTVOS
Lenovo ajoina iyo HomeKit bandwagon neayo Smart Home Zvakakosha